I-RCGP Workshop eyamukelekile - I-Foundation Reward Foundation
Ikhaya I-RCGP Workshop eVunyelwe
I-Reward Foundation inikezwe isikhundla se-RCGP Accredited ukuletha umhlangano wosuku olulodwa ogunyazwe yiRoyal College of General Practitioners yase-United Kingdom ku- Umthelela Wezithombe Zobulili Ezingcolile Ze-Inthanethi Emzimbeni Wengqondo Nezemvelo. Njengamanje siyayithengisa njenge Izithombe zobulili ezingcolile kanye nezidakamizwa zocansi. Inikezela ngamaphoyinti we-7 CPD wenguqulo yezinsuku ezigcwele namakhredithi we-4 wenguqulo yezinsuku ezinhlanu. Ungathola imininingwane engaphezulu yesifundo ngasinye noma uqale ukubhuka ngokuchofoza lesi isixhumanisi.
I-RCGP iyinhlangano yobulungu yobungcweti kanye nomgcini wamazinga odokotela bemindeni abasebenzela ukukhuthaza ukwenza kahle ekunakekelweni kwezempilo okuyisisekelo. Njengo-General Practitioner (GP), ukugcina ulwazi lwakho nokugcina amakhono akho esesikhathini nge-Continuing Professional Development (CPD) kungumsebenzi wobuchwepheshe. Ama-GPs adingeka ukuthi enze amakhredithi angama-50 (amahora) we-Continuing Professional Education unyaka ngamunye njengengxenye yenqubo yabo yokuphinda aqinisekise ngobungcweti.
The Izimiso Eziyinhloko Zokuqhubeka Nokuthuthukiswa Kwezentuthuko kusukela e-Academy of Medical Royal Colleges inikeza isiqondiso sendlela ochwepheshe bezokwelapha okufanele benze ngayo i-CPD yabo. Leli klasi lingase lifanelekele ukuthola izikweletu ze-CPD zamalungu eziKolishi zaseRoyal zezokwelapha ezilandelayo:
Isikhundla sempilo yezocansi nokuzala
Ikholeji yaseRoyal of Odstetricians kanye namaGynecologists
IRoyal College Yezingane Nezempilo Yezingane
I-Royal College of Physicians yase-Edinburgh
I-Royal College of Physicians yase-Ireland
I-Royal College of Physicians yaseLondon
I-Royal College of Physicians & Odokotela Abahlinzayo baseGlasgow
I-Royal College of Psychiatrists
Ikholeji yaseRoyal of Odokotela base-Edinburgh
Ikholeji yaseRoyal of Odokotela base-England
Ikhomishana YaseRoyal of Odokotela Abahlinzayo base-Ireland
Isikhundla se-Forensic and Medicine Legal
Isifundo sethu siphinde sivulekele abameli, abafundisayo kanye nabanye ochwepheshe. I-Law Society yaseScotland iyayamukela i-CPD ngaphansi kwe-self-certification protocol.
Umthelela Wezithombe Zobulili Ezingcolile Ze-Inthanethi Emzimbeni Wengqondo Nezemvelo
I-workshop yethu yosuku olulodwa inikeza amahora angu-6 wokufundisa ubuso nobuso kanye nehora lokufunda ngaphambi kokufunda, ukunikeza amahora angu-7 wezikweletu ze-CPD.
Inguqulo yesigamu se-workshop itholakala ngesicelo. Inkambo egcwele ingabuye inikezwe njengemihlangano yesigamu sezinsuku ezinsukwini ezingu-2 noma njengemihlangano yehora le-2 ngezinsuku ze-3.
Okuqukethwe kobufakazi bubufakazi obusekelwe ngokugcwele futhi buhlinzeka ngethuba elihle lokufunda nokuxoxa ngokucabangela. Ihlanganisa:
Izincazelo zezindaba zezempilo zobulili ezihlobene nezithombe zobulili ezingcolile
Izinselelo zeBongo ngokuphathelene nokulutha
Ukusetshenziswa kwezithombe zobulili ezingcolile kanye nemiphumela yalo
Impembelelo empilweni yangempela
Impikiswano empilweni yengqondo - abadala nabantu abasha
Izinto zokufundisa zihlanganisa ukuxhaswa okusekelayo. Ababambe iqhaza bazokwazi ukufinyelela ezinhlobonhlobo zemithombo ye-intanethi, kufaka phakathi izixhumanisi ezinzulu kumaphepha aphenyo angaphansi.
Uma ungathanda ukuthi i-Reward Foundation ilethe lo msebenzi wokuzilolonga, iRoyal College noma iBhodi Yezempilo, sicela usiphisele inothi usebenzisa ifomu lokuxhumana elisezansi kwaleli khasi. Sinesipiliyoni sokufundisa e-USA nakulo lonke elaseYurophu.